तनहुँमा कांग्रेस नेताले भने : सरकारले सुतेको बाघलाई ब्युँझायो ! – tshorolpa
Home/समाचार/तनहुँमा कांग्रेस नेताले भने : सरकारले सुतेको बाघलाई ब्युँझायो !
तनहुँमा कांग्रेस नेताले भने : सरकारले सुतेको बाघलाई ब्युँझायो !
News १८ मंसिर २०७७, बिहीबार १७:४६
१८ मंसिर। तनहुँमा बुधबार उद्घाटन गर्न नपाएको पुल उद्घाटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकारले आफूहरुलाई ब्युँझाइदिएको टिप्पणी गर्दै देशभर सरकारविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
अनलाइन खबर -साभार
काठमाडौं उपत्कामा १ लाख ६५ हजार व्यक्तिलाई मात्रा दोस्रो खोप लगाउने कार्यक्रम खोप शाखा प्रमुख :डा झलक शर्मा गौतम
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:२१